XOGTA QARSOON: Hal arin Oo aadan ka ogeyn Weerarkii Barcelona | Xaqiiqonews
XOGTA QARSOON: Hal arin Oo aadan ka ogeyn Weerarkii Barcelona
Hal xiraalaha Wareeriyey Booliska barcelona Laga soo bilaabio shalay galab ilaa Saakay ayaa ahaa Macluumaadka ku Saabsan Ninkii Fuliyey Weerarkii Gaari jiirsiinta ahaa ee ka dhacay Barcelona.
Booliska Barcelona ayaa baahiyey In ninka Is qaxiyey Uu ahaa Nin ka soo jeeda marroco oo lagu magacaabo idiris aukabir oo 28- sano jir ahaa balse waxaa yaab noqotay markii Booliska ay ogaadeen In ninka Is qarxiyey uusan aheyn idiris balse u ahaa walalkiis ka yar oo lagu magacaabi jiray muuse aukabir oo 18 sano jir ahaa.
Muse aukabir ayaa fuliyey weerarka barcelona oo sababay dhimashada 15 Qof iyo Dhaawaca in ka badan 100 qof waxaa muuse Uu soo ijaartay baabuur si ay arintaasi ugu suurtgashana waxa uu isticmaalay Passporka walalkiisa Ka weyn ee idirs Aukabir.
Ka Dib daqiiqado weerarka dhiiga Daatay Booliska Spain ayaa baahiyey sawirada idirs aukabir iyagoo shaagay in ninkani uu yahy kan fuliyey weerarka waxaana arintaasi islamarkiiba qaatay saaxafadda balse arinta cajiibka ah ayaa waxa ay noqotay markii idiris uu isku dhiibay Xarun boolis isagoo sheegay in uu uusan waxba ka ogeyn weerarka waxaana ka danbeysay in booliska ay dib u soo saareen sawirro ay kus sheegayaan in Idirs uu Bari ka yahay weerarka Argigixiso sida ay hadalka u dhigeen.
Weeraradan mataanaha ee Ka dhacay Barcelona Waxaa sheegtay mas,uulayadooda dowladda islaamka(DAACISH) Balse dowladda Spain ayaa ku tilmaamtay Weeraro Argigixiso.